Uwe ejiji ejiji ejiji - ogologo na mkpirikpi, uwe ejiji na polo, na mkpuchi ma na-enweghị, uwe ejiji maka snịịka
Uwe ejiji - gini bu ha na ihe ha ga-eji?
Ụmụ agbọghọ ndị na-ahọrọ ụdị ejiji, n'ọtụtụ ọnọdụ, na-eji ejiji dị mma, nke na-agụnye uwe akwa na T-shirts ma ọ bụ Jetet. Ka o sina dị, n'ihi na ndị na-emepụta taa na-eji uwe eji eme egwuregwu nke na-enye nkasi obi n'oge sọks na, ma e wezụga ya, na-ele anya nke ọma ma na mbụ.
Uwe ejiji 2017
Egwuregwu ndị inyom na-eji mara mma ma dị jụụ na-anọgide na-ewu ewu ruo ogologo oge. Ka oge na-aga, ha na-agbanwe n'ile anya, Otú ọ dị, ha anaghị efunahụ ha. Ihe ndị a dị mma nke ọma na sneakers , sneakers, slips na akpụkpọ ụkwụ ndị ọzọ na akwa. Tụkwasị na nke a, ha bụ nnukwu ọkpọ baseball, akpa azụ na ngwa ndị ọzọ. A na-ede uwe elu ejiji kachasị mma eji ejiji eji ejiji 2017 na ndepụta ndị a:
uwe ejiji na uwe na-adighi nma na nkwekota;
polo-uwe bụ gizmo dị mma nke nwere ngwugwu mara mma na obere eriri bọtịnụ;
ụdị na-ekpo ọkụ. Ha nwere ike inwe ogologo oge dị iche iche, ejiji mma na igbu egbu, ma ha nile dị n'otu site na ọnụnọ nke mkpuchi nke nwere ike iwepụ ma ọ bụ na ọ bụghị;
eji ejiji ejiji, na-emesi akụkụ niile nke nwanyi anya ma na-eme ka onye nwe ha dị elu karị.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị inyom mara mma kwenyere na uwe ejiji egwuregwu dabara naanị ụmụ agbọghọ, n'eziokwu, nke a abụghị n'ọnọdụ niile. E nwere ụdị ndị inyom toro eto pụrụ iyi, na uwe akwa dị otú ahụ, ha ga-eleba anya na nwata. Nhọrọ dịgasị iche iche na-enye nwa agbọghọ ọ bụla ohere ịhọrọ ihe ziri ezi maka onwe ya, a pụkwara ime nke a n'agbanyeghị age, iwu na ọnọdụ mmadụ.
Uwe ejiji na mkpuchi
Uwe ejiji ejiji, uwe na-adighi nma na ndi nwere onwe ha na-ewu ewu karia umu kpakpando Hollywood. Dịka ọmụmaatụ, na uwe mwụda nke onye na-abụ abụ Kylie Minogue, e nwere akwa ejiji egwuregwu ogologo oge na kpakpando nke kpakpando na-aga mgbe ọ na-ejegharị ma ọ bụghị ihere ọ bụla. Ụdị uwe ndị dị otú ahụ nwere ike ịdịgasị iche iche ma mee ka e gbuo ha, Otú ọ dị, ọnụnọ nke mkpuchi dị n'otu.
Nke a na-adọrọ nnọọ mmasị na nke mbụ, mana, na mgbakwunye, ọ na-arụ ọrụ nchekwa. Ya mere, mkpuchi nwere ike dochie isi mkpuchi ma chebe onye nwe ya site na ifufe ma ọ bụ ọdịda, dịka ọmụmaatụ, na mmiri ozuzo malitere na mberede. N'ọdịdị ụfọdụ, mkpuchi nwere ike bụrụ nke nwere ike iwepu, ma n'ọtụtụ ọnọdụ ọ na-ejikarị aka na-eme ka akụkụ nke ngwaahịa ahụ dị.
Egwuregwu Egwuregwu Kwesịrị Ekwesị
Uwe eji ejiji ejiji nke ọma na ọtụtụ ikpe ruru ikpere. N'elu elu ha nwere ike ịnwe eriri ma ọ bụ obosara ọ bụla, yana akwa uwe ọ bụla. Ụdị uwe ndị a dị mma maka ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ, ma, ọ bụ "pyshechka" ha na-elekwa anya nke ọma. Karịsịa ọ na-eche banyere ndị nwe ọnụ ọgụgụ dị ka "apụl" , nke na-enweghị ọkpụkpọ akpọ. N'ihi ọdịdị nke ịkpụ, ngwaahịa ahụ bụ ndò na-anọpụ iche, dịka ọmụmaatụ, uwe ejiji na-acha ntụ ntụ nke ụdị a na-eme ka ezughị okè nile dị na ya ma zoo ụfọdụ ihe ndọghachi azụ.
Uwe ogologo egwuregwu ogologo na-eru n'ala dị mma maka njem mgbede n'oge mgbede. Ọ bụrụ na ụbọchị dị n'ime ha nwere ike ịbụ obere ihe na-adịghị mma, mgbe anyanwụ dara, ụlọ mposi ndị a dị mkpa. Ebe ọ bụ na a na-eji ihe dị ukwuu eme ihe, ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume ịkụzi ha. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị eji eme egwuregwu dị ka ihe eji eme ihe, akwa, mkpọchi, mkpuchi na nkọwa ndị ọzọ nke ụdị mgbanwe ndị a nwere ike chebe onye nwe ya site na ifufe na ikuku.
Egwuregwu ngwa ngwa
Uwe ejiji ezumike, nke dị mkpụmkpụ, gosipụtara ịma mma na nkwekọrịta ụkwụ nke onye nwe ha gburugburu. Dị ka a na-achị, ha na-ebuwanye ibu ruo na ala, si otú ahụ nye nwanyị nke ejiji ejiji na amara pụrụ iche. Dị ka usoro iwu n'ozuzu, ụlọ mposi ndị a na-ejikọta na sneakers, sneakers, moccasins ma ọ bụ siphons , Otú ọ dị, ụfọdụ ụmụ agbọghọ atụghị egwu ijikọta ha na akpụkpọ ụkwụ dị elu, na-enweta ihe ndị dị egwu na ihe ndị dị egwu.
Egwuregwu Iwu Dress
Ebe dị iche iche n'etiti egwuregwu maka egwuregwu bụ uwe-polo, nke na-enye onye nwe ya nkasi obi dị egwu. N'ihi ọdịdị nke ịkpụ na ịdị nro nke ihe ndị na-eme ihe a, ọ dị mma maka ụmụ agbọghọ na-eto eto, na ndị inyom nwere obere ego. Ka ọ dị ugbu a, ka ị ghara ịdọrọ uche nke ndị ọzọ gaa na mmezighị emezi nke ọnụ ọgụgụ ahụ, na ikpe ikpe a, a na-atụ aro ka ịhọrọ ihe ndị e ji eji akwa uwe.
Karịsịa a na-ewu ewu na ụmụ agbọghọ na-eji ejiji ejiji ejiji. Ọ na-ese ìhè, na-emeghị ihe ọjọọ na n'ụzọ ụfọdụ dị nsọ, n'ihi ya, ụmụ agbọghọ na-ahọrọkarị ngwaahịa a n'onwe ha. Ka ọ dị ugbu a, ihe nlereanya ọcha ahụ nwere ike iji nlezianya na-agbakwunye onye nwe ya ole na ole pound na, Ọzọkwa, ọ bụ nhọrọ kachasị mma.
Dabere na ọnọdụ ahụ, ejiji ogologo oge ọ bụla a na-eji ejiji ejiji dịka ihe ndị na-esonụ:
dịka ngwaahịa nwere onwe ya n'otu otu na akpụkpọ ụkwụ dị mfe, sneakers, sneakers, moccasins ma ọ bụ siphons. A naghị ejikọta akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ na ụdọ aka;
Tinyere uwe ogologo ọkpa ma ọ bụ jeans, jeggings ma ọ bụ elk. Aro maka nhọrọ nke akpụkpọ ụkwụ na nke a ga-abụ otu;
dịka ya na eriri buru ibu na akpụkpọ ụkwụ mara mma na mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ otu ikiri ụkwụ dị ka gbọmgbọm;
Otu mgbede dị jụụ jikọtara ya na obere jaket akpụkpọ anụ ma ọ bụ bombu.
A na-eyikarị ejiji ejiji ejiji ejiji na leggings ma ọ bụ tights . Nchikota a na-eme ka obosara nke obodo, nke di mma maka ubochi ubochi. Ị nwere ike ịgbakwunye ya na sneakers dị mma ma ọ bụ moccasins, na akpụkpọ ụkwụ mara mma ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ na traktọ naanị. Ka ọ dịgodị, n'ọnọdụ ụfọdụ, ngwaahịa ndị a nwere ike na-eyi dịka ejiji onwe ha. A na-ahapụ nke a n'oge ezumike dị n'ụsọ osimiri, n'akụkụ ọdọ mmiri ma ọ bụ n'ebe ndị ọzọ a na-egbochi akwa iko ma ọ bụ akwa ịsa ahụ.
Egwuregwu Egwuregwu Kwadoro
Ụdị dị iche iche nke ejiji eji ejiji ejiji, na-ele anya dị mma. Ha dị nnọọ mma, ọ fọrọ nke nta ka ha ghara imebi ma buru ụdị nke onye nwe ya. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị dị na uwe ejiji ụmụ nwanyị anaghị adị oke ọnụ, ya mere, onye nnọchiteanya nke mmekọahụ nwere ike ịzụta ha. Dabere n'onye ọ bụla masịrị ya, ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị nwere ike ịzụta akwa uwe ogologo ma ọ bụ ogologo, uwe ma ọ bụ nke na-adịghị mma maka oge okpomọkụ, nke dị iche iche na-egosipụta na ụlọ ahịa nke oge a.
Uwe ejiji n'uwe zuru ezu
Egwuregwu na uwe na-egwu egwuregwu dị ọ bụghị naanị ụmụ okoro, ndị na-eto eto, ndị na-eme ihe ike, ma ndị inyom mara mma na ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ. Ndị na-emepụta oge a na-emepụta ọtụtụ ụdị ngwaahịa ndị na-adịghị eme ka ahụ erughị ala na ụmụ nwanyị bara ụba, na mgbakwunye, ihu anya belata olu ha ma zoo ezughị okè ndị dị na ya.
Iji nweta ihe a chọrọ, ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe na-akwado "pyshechkam" na-ege ntị na nuances ndị a:
ejiji ejiji ojii adịghị anya mgbe niile belata olu. N'okwu a, uru bara uru agaghị abụ agba nke uwe ahụ, kama ọ bụ ụdị ya, ịkpụ na nha. Ya mere, ndị inyom zuru oke ekwesịghị ịhọrọ ụdị nha abụọ dị ukwuu, nke yiri akwa mkpuchi - nke a ga-agbakwunye na ọnụ ọgụgụ nke akpa azụ, ma ọ gaghị eme ka onye nwe ya slimmer. Uwe ọ bụla kwesiri ka dabara nha , ma ọ bụghị ya, nsonaazụ ahụ nwere ike ịbụ ihe megidere ihe a na-atụ anya ya;
ezi mma agaghị ahọrọ ihe siri ike. Ụdị dị otú ahụ na-emesi ọnọdụ nsogbu ike, ọ dịghịkwa agbanwe ha;
Ogologo oge kachasị mma maka ụmụ agbọghọ buru ibu bu elele. Ka o sina dị, ọ bụrụ na fashionista nwere ụkwụ mara mma, ọ nwere ike inye ya mmasị na nhọrọ ndị na-ekpuchighị ikpere ya;
Uwe uwe Maxi ga-adọrọ mmasị ụmụ nwanyị zuru oke ma ọ bụrụ na ha nwere elu karịa nkezi;
a naghị anabata ụdị ndị dị na ala nke uwe ala maka "pyshechek";
ihe eji eji ejiji a ga - adị oke, edepụta ma jidekwa ya.
Uwe a na-ekpo ọkụ
Uwe dị ike n'okpuru ikpere
Ndị uwe ojii na-eto eto na-eto eto
Ụmụaka ndị a na-agbanye ọnụ
Uwe eji akwa capsule - ihe atụ
Uggs na rhinestones na nkume
Nyocha nke stool maka dysbiosis
Asụsụ - enyo nke ahụ ike
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - asụ Mantoux?
Orchis - ngwa
Azụ anụ - ọma na ihe ọjọọ
Ala nke onwe, nke dị ọnụ ala karịa ụlọ dị na Moscow
Akara maka nwanyi di ime
Fresh kabeeji dị mma
Nhazi nke ime ụlọ
Okporo osisi ndị e ji karama plastic mee
Kylie, enyemaka! Onye na-eto eto Taiga nwere ike ịga n'ụlọ mkpọrọ n'ihi na anaghị akwụ ụtụ isi
Ụlọ Cineraria - isi iwu nke nlekọta na-eto eto n'ụlọ
Uchechi ehihie na abalị
Ogwe ihe mgbochi dị elu
Obi na utoojoo ude ihendori
Ikike nwatakịrị ahụ bụ maka ikike ụmụntakịrị